Imwe nzira yeApple Pay, CurrentC yave kuda kuvhara | IPhone nhau
Mavhiki mashoma apfuura mubatanidzwa weMCX wakazivisa kuti chirongwa icho chave kushanda kwemakore mashoma, CurrentC yanga ichimisa kuvhurwa kwayo.nekuda kwemamwe matambudziko ekushanda pamwe nekuchengetedza Ndakanga ndiine pachikuva. Asi zvinoita sekunge matambudziko aya akakosha kupfuura zvinoita uye anogona kumanikidza chikuva ichi kuvhara asati atokwanisa kupa iyi yekubhadhara sevhisi kumusika, iyo isina kubva paNFC tekinoroji, asi inoshandisa chishandiso chinoenderana nemapuratifomu ese uye nhare. pamusika, kuitira kuti mashandisiro ayo apararire nekukurumidza pakati pevashandisi vese.
MCX ichangobva kuziviswa kumiswa kwebasa rayo muna Chikumi 28 pakati pevashandisi vese vari kushandisa iko iko beta. Vese vashandisi vakanyorera chirongwa cheBeta uye vakagamuchira coupon yechipo, vachakwanisa kuishandisa kusvika Chikumi 28, musi unozomiswa kushanda chikumbiro uye nemari yavasingazokwanisi kuwanikwazve. angadai akapinda sevhisi iyi.
MCX yakatanga kugadzira CurrentC nechinangwa che ipa kubhadhara kwakananga kuburikidza neakaundi account yevashandisi pasina kuve nekadhi rechikwereti. Iyo MCX Consortium inoumbwa nenzvimbo hombe dzakadai seWalmart neBest Buy, ine zvitoro izvozvi izvo hazvipe Apple Pay kuenderana uye yanga yakamirira kuvhurwa kweNextC kuwedzera nzira dzekubhadhara pakati pevatengi vadzo.
Ipo CurrentC iine chirongwa chakaremara, Apple Bhadhara yakangowedzera 34 mabhangi uye zvikwereti zvikwereti izvo zvinotobvumidza iwe kuti uwedzere yako kiredhiti uye makadhi ekubhadhara. Parizvino, nyika yekupedzisira ichagamuchira Apple Pay nemaoko akavhurika, sezvatakakuzivisai nezuro ichave Switzerland, iyo ichasvika Muvhuro unotevera, Chikumi 13, izuva rimwe chete iro ichaitwa WWDC.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Imwe nzira yeApple Pay, CurrentC yave kuda kuvhara
iTunes kuti igamuchire makuru dhizaini kuWWDC, sekureva kwaGurman